Lava tongotra kanefa tsy mahavita dingan-dava - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dia mitohy hatrany ry zareo ity fitetezam-pirenena ataon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Raha nisy ny fifidianana maneran-tany dia ho nambara fa manao propagandy ny tenany, kanefa tsy mbola misy izany fifidianana handraisany anjara mivantana izany dia tsy fantatra izay mahavariana azy any ivelany.
Vao haingana teo izy no tany Isiraely. Efa nanaovantsika resaka teto izany (jereo tafatafa teo aloha). Izao indray dia io izy fa lasa namangy ny Papa Fransoa. Famangiana natao ny asabotsy 29 jiona teo izany. Raha katolika izy dia ho azoko ihany ny tena nahamaika azy ho any. Fahasoavana tokoa tsisy tahaka izany mihaona mivantana amin’ny Papa Ray Masina izany. Ireo mahay momba ny finoana katolika afaka manazava amintsika ny lanjan’ny indulgence. Hery Rajaonarimampianina dia tsy katolika, sanatria tsy fanilihana ny hafa finoana tsy hihaona amin’ny Papa Ray Masina no ilazako izany. Marihiko tsara fa ity Papa ity dia isan’ireo Papa mandala ny fampifanatonana ny fiangonana rehetra. Mbola hita izany tamin’ny fanolorana ny pallium natao ny alahady nanaraka io fandraisana ny Filoha io. Alahady 30 jiona io. Nanasa ny mpitondra ny fiangonana ortodoksa ny Papa hiara-hivavaka nandritra ny fanolorana ny pallium ho an’ireo arseveka 21 tamin’ireo 24 tokony ho nozaraina izany.
Inona no anton-dia e ?
Rehefa tsy resaka finoana ary no nandehanany tany dia inona ? Izay no mahatonga ny gazety sasany ilaza fa resaka tombontsoam-pianakaviana no tena nahatonga azy hanao iny dia iny. Ny sary naseho tamin’iny fihaonana iny tokoa dia olona tsy mpitondra ny firenena no maro tamin’ireo nahazo fahasoavana hihaona tamin’ny Papa. Tsy tsodrano ho an’ny mpitondra firenena izany no nalaina tany an-daniny izay. Etsy an-kilany, raha ny fijeriko tokoa dia tokony ho nanao ezaka namonjy ny fihaonana eo amin’ny Eropeanina sy ny Afrikanina ny tenany. Eny fa na dia ampahany ihany aza sisa ho tratrany. Fa any amin’io fivoriana io avokoa ireo tena mpiara-miasa akaiky amintsika ary tsy voatery hitety vazan-tany izy fa avy hatrany dia hitany tao avokoa izay tiany… raha tena nilaina ny nihaona tamin’izy ireo.
Voalaza fa fitadiavana lalam-barotra sy famatsiam-bola no vaindohan-draharaha ho an’ny Filoha raha manao ireny “voyage présidentiel” ireny izy. Sady tsy ny antony voalohany no tsy ny antony faharoa no ho azon’i Madagasikara raha mihaona ny filoham-pirenena sy ny filohan’ny Vatikana (manana lentan’ny filoham-pirenena). Ka eo no manahiran-tsaina amin’izao dia izao izay mampitombo isa ny fivoahana any ivelany. Amin’ny ora nanoratana an’ity tafatafa ity dia mbola any ivelany ny Filoham-pirenena. Raha ny vaovao farany navoakan’ny fiadidian’ny Repoblika aza dia nahemotra ny fiverenan’ny Filoham-pirenena izay novinavinainy ho tontosa ny alarobia na alakamisy 3 jolay.
Miandry fa vasa e !
Taorian’ireo fivezivezena any ivelany ireo dia tsy hita loatra izay tena voan-dalana ho an’ny vahoaka. Ny vaovao ratsy aza no tena nasosoka tsikelikely. Nambara fa hisintaka amin’ny Jirama ny fanjakana ny tsy miankina izany no hitantana azy). Rehefa ny tsy miankina no mitantana dia ny tombontsoany no tadiaviny fa tsy ny tombontsoan’ny vahoaka ka izay no mampanahy. Naroso koa eny amin’ny fampitam-baovao fa ho tanterahina ny vérité de prix momba ny vidin’ny solika. Ampiakarina tsikelikely hono e. Tsy mihetsika ny fikambanan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Ity farany efa nifaly fa nahazo minisitera dia nangina raha ny RNDC no resahana ny hafa zara heno ary tsy fantatra na maty na velona.
Mandritra izany fivezivezena izany dia tsy tanteraka ny asa sasany. Tsy tonga eny anivon’ny Antenimieram-pirenena ny lalàna maromaro tena ilaina amin’izao fotoana izao. Isan’ireny ny lalàna momba ny Tetibola fanitsiana (loi de finances rectificatives) eo koa ny lalàna momba ny fifidianana kaominaly. Tsy maintsy mandalo eo anivon’ny Filankevitry ny minisitra ireo volavolan-dalàna vao azo alefa eny amin’ny Antenimieram-pirenena. Tsy maintsy ny Filoham-pirenena no mitarika izany Filankevitra izany. Izy anefa tsy eo. Miandry fa gasy… Tsapa araka izany fa lava tongotra kanefa tsy mahavita dingan-dava ny mpitondra ny firenena ary miadam-piasa ihany koa.